New Oriental Education သည် ပညာရေး ထုတ်ကုန် အရောင်း ပလက်ဖောင်း တစ်ခု တည်ထောင် သည် - Pandaily
Michael Yu, founder of New Oriental Education (Source: Yu’s official WeChat account)
Jun 08, 2022, 21:47ညနေ 2022/06/08 23:01:22 Pandaily
“Live Business ဟာ တတိယ ေျမာက္ စီးပြားေရး ေတာ္လွန္ေရး လို႔ ထင္ ပါတယ္၊ ပထမ တစ္ႀကိမ္ ကေတာ့ Hypermarket ၊ ဒုတိယ တစ္ႀကိမ္ ကေတာ့ E-Commerce ၊ တတိယ တစ္ႀကိမ္ ကေတာ့ လက္ရွိ Live လႊင့္ ေနပါတယ္” ဒီလို ေရး သားထား ပါတယ္New Oriental Education ကို တည်ထောင်သူ Yu Minhongဒါကေတာ့ ဗုဒၶဟူးေန႔က တရား၀င္ WeChat အေကာင့္ မွာ Live လႊင့္ တဲ့ စီးပြားေရး နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သူ႔ရဲ႕ အျမင္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူသည် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နယ်ပယ်တွင် New Oriental Education ၏ ရှာဖွေရေး ဦး တည်ချက် ကိုထပ်မံ ဖော်ပြခဲ့သည်။
ယခု သီတင်းပတ် အစောပိုင်းက Yu Minhong သည် New Oriental Live အဖွဲ့ ကိုဖွဲ့စည်းရန် New Oriental ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန် များကို အထူးပြု သည့် “Oriental Optimization” နှင့်မတူ သည်မှာ ဆက်စပ် စာရေးကိရိယာ များကိုလေ့လာ ခြင်းအပြင် ရုပ်သံလိုင်း အသစ် သည်၎င်း၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်များ၊ ပညာရေး နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာအုပ် များ၊ အသိဉာဏ်ရှိသော ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ သင်ကြားရေး ကိရိယာ များ ကိုမြှင့်တင်ရန် ကတိက ဝတ်ပြု ထားသည်။
“မႏွစ္က Double Down Policy ကတည္းက ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ New Oriental ဟာ ပညာေရး ထုတ္ကုန္ ေတြကို အဓိက ထားၿပီးေတာ့ ပညာေရး ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေန ပါတယ္၊ ထုတ္ကုန္ ေတြမွာ အေရာင္း လမ္းေၾကာင္း ေတြ လိုအပ္ ပါတယ္၊ အေရာင္း လမ္းေၾကာင္း ေတြ လိုအပ္ ပါတယ္၊ ေအး ဂ် င့္ ေတြအျပင္ အထိ ေရာက္ ဆံုး အေရာင္းအ၀ယ္ လမ္းေၾကာင္း ကေတာ့ Live လႊင့္ ၿပီး ပစၥည္းေတြ သယ္ေဆာင္ လာ တာျဖစ္ တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့္ သေဘာေပါက္ ပါတယ္” Yu Minhong က အချိန် ကြာ လာသည်နှင့်အမျှ “New Oriental Live Belt” သည် ပညာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် များအတွက် အသုံးဝင်သော အရောင်း ပလက်ဖောင်း ဖြစ် လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။
အာရုံ ကိုဆွဲ ဆော င်ရန် Yu နှင့်သူ၏ အဖွဲ့သည် မေလ ၃၀ ရက်မှ ဇွန် ၁ ရက်အထိ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် မှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ပညာရေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန် တစ် သန်းကျော် ရောင်းချ နိုင်ခဲ့သည်။
ယခင် အစီရင်ခံစာ များအရ တစ်နှစ် ခွဲ နီးပါး ရှာဖွေ တူးဖော် ပြီးနောက် New Oriental မှ ထောက်ပံ့ သော အခြား တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် ပလက်ဖောင်း ဖြစ်သော Oriental သည် တစ်နေ့လျှင် GMV ယွမ် ၁ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄၉ ၆၀၀) ထက်ကျော်လွန် နိုင်သည်။ ဇွန်လ ၂ ရက်နေ့တွင် Yu သည် Oriental ၏ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် မှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီး ထိုနေ့ တွင်ပင် GMV သည်ယွမ် ၂ သန်း နီးပါး ရှိသည်။
နှစ်ဆ ကျဆင်း ခြင်း မူဝါဒ အကျိုးသက်ရောက် ပြီးနောက် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် ခြင်း ကိုအဓိက ပညာရေး ကုမ္ပဏီ များက အသွင်ပြောင်း ခြင်းနည်းလမ်း တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူ ကြသည်။ TAL နှင့် Doushen (Beijing) Education Technology Co., Ltd. တို့သည် ကိုယ်ပိုင် ပညာရေး ထုတ်ကုန် လမ်းကြောင်း များ ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:New Oriental Education တည်ထောင်သူ Yu Minhong သည် ကုမ္ပဏီမှ နုတ်ထွက် ခြင်းကို ငြင်းဆို
Tal သည် လက်ရှိတွင် သင် ထောက် ကူ ပစ္စည်းများ၊ စာအုပ် များနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာများ ကို၎င်း၏ တုန်လှုပ် စေသော တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် လိုင်း မှတဆင့် ရောင်းချ နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ပိုင် တီထွင်ထားသော သင် ထောက် ကူ ပစ္စည်းများ ရောင်း ချပြီး လူများ၏ အာရုံ ကိုဆွဲဆောင် နိုင်ခဲ့သည်။ Doushen Education မှ ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာတွင် ယခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ် တွင်၎င်း၏ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် စီးပွားရေး ဝင်ငွေ မှာယွမ် ၄၅. ၇၆ သန်း ဖြစ်ပြီး ပညာရေး ဆော့ဖ်ဝဲ နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲ ရောင်းအား မှာယွမ် ၂၄. ၀၄ သန်း ဖြစ်သည်။
Tags double reduction | E-Commerce | Education | live streaming | New Oriental
Culture Apr 06 ဧပြီ 6, 2021
တ႐ုပ္နိုင္ငံ ေဘက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ဗီဒီယိုကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုက ျမန္ မာနိုင္ငံမွ စာအုပ္ႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ား ေဆာင္ ရြက္ရန္ ကုန္သည္မ်ားညီလာခံ၊ ျဖန္႔ခ်ိေရးက႑ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးေနသည္။
Industry Jun 28 ဇွန် 28, 2021